Fomba Hamahana ny Olana Mifandray Amin’ny Vola | Fitiavan’Andriamanitra
Fandaminana Olana Mifandray Amin’ny Vola
Niresaka momba ny mpiray finoana mifampitory any amin’ny fitsarana ny apostoly Paoly ao amin’ny 1 Korintianina 6:1-8. Nalahelo izy satria nisy Kristianina ‘sahy nitory ny namany tany amin’ny fitsarana ka niseho teo anatrehan’ny olona tsy marina.’ (Andininy 1) Nilaza i Paoly fa tsy tokony hanao izany ny Kristianina, fa mila alamina eo anivon’ny fiangonana ny olana. Hodinihintsika ny antony lehibe nanomezany an’io torohevitra io. Horesahintsika avy eo ny toe-javatra tsy voakasik’izany.
Mety hisy olana mifandray amin’ny vola eo amintsika sy ny mpiara-manompo amintsika. Raha sendra mitranga izany, dia tokony halamina araka ny fomba itiavan’i Jehovah azy, fa tsy araka izay tiantsika. (Ohabolana 14:12) Nilaza i Jesosy fa tena tsara raha alamina haingana ny olana, dieny mbola tsy mitatra be. (Matio 5:23-26) Mampalahelo anefa fa misy Kristianina tia mifanditra, ka mitory ny mpiray finoana aminy any amin’ny fitsarana. Hoy i Paoly: “Tena faharesena tanteraka ho anareo ny ifampitorianareo.” Nahoana? Tena mety hanala baraka ny fiangonana sy ilay Andriamanitra ivavahantsika izany. Hotadidintsika foana àry ilay tenin’i Paoly hoe: “Tsy aleo ve manaiky hiharan’ny tsy rariny?”—Andininy 7.
Nilaza koa i Paoly fa misy fandaharana tsara nataon’Andriamanitra mba handaminana olana samihafa eo anivon’ny fiangonana. Nanome anti-panahy izy, ary manana fahendrena izy ireny satria mahalala ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly. Nilaza i Paoly fa ‘afaka mitsara ny adin’ireo rahalahiny’ amin’ny “raharaha momba izao fiainana izao” izy ireny. (Andininy 3-5) Misy dingana telo asain’i Jesosy arahina rehefa misy manao fahadisoana lehibe, ohatra hoe manendrikendrika na mamitaka: 1) Miezaka handamina izany mitokana ireo voakasika. 2) Raha tsy mahomby izany, dia mitondra vavolombelona iray na roa. 3) Raha tsy mahomby indray izany, dia entina eo anivon’ny fiangonana ny raharaha, ka ny anti-panahy no solontenan’izy io.—Matio 18:15-17.
Tsy voatery ho mpisolovava na mpandraharaha ny anti-panahy, sady tsy tokony hanao ny fanaon’izy ireny. Tsy izy no mamoaka fitsipika handaminana ny olana mifandray amin’ny vola eo amin’ny samy rahalahy. Miezaka kosa izy hanampy azy ireo hampihatra izay lazain’ny Baiboly sy hahita vahaolana ary hitandro fihavanana. Afaka manontany ny mpiandraikitra ny faritra na ny biraon’ny sampana izy, raha misy raharaha sarotra. Hojerentsika kosa izao ny toe-javatra tsy voakasik’ilay torohevitr’i Paoly.
Takin’ny lalàna na efa fanao fotsiny indraindray ny mampakatra fitsarana, fa tsy hoe tia tena na te hifanditra ilay olona manao an’ilay izy. Mety ho izay ihany, ohatra, no ahafahana mahazo taratasy fisaraham-panambadiana sady ahafahana mitazona ny zanaka sy mahazo vola amin’ny vady, aorian’ilay fisarahana. Mety ho tsy maintsy mampakatra fitsarana koa ny olona iray vao mahazo onitra avy amin’ny kompania fiantohana, na manamarina didim-pananana, na manaporofo fa tompon-trosa izy rehefa misy milaza ho bankirompitra. Mety hisy koa rahalahy voatery hitory any amin’ny fitsarana mba hiarovana ny tenany amin’izay nitory azy. *
Tsy mifanohitra amin’ilay torohevitr’i Paoly àry ny fampakarana fitsarana amin’ireo raharaha ireo, raha tsy noho ny fitia te hifanditra no anaovana azy. * Ny fanamasinana ny anaran’i Jehovah sy ny fihavanana ary ny firaisan-kina eo anivon’ny fiangonana anefa no tokony ho zava-dehibe indrindra amin’ny Kristianina. Ny fitiavana no tena amantarana ny mpanara-dia an’i Kristy, ary ‘tsy mitady izay hahasoa ny tenany ny fitiavana.’—1 Korintianina 13:4, 5; Jaona 13:34, 35.
^ feh. 2 Mahalana ny hoe misy Kristianina manao heloka bevava amin’ny Kristianina hafa, toy ny fanolanana, herisetra, vonoan’olona, na halatra lehibe. Raha izay anefa no mitranga, dia azo atao ny mampandre ny manam-pahefana, na dia mety hiafara amin’ny fitsarana aza izany.
^ feh. 3 Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo Ny Tilikambo Fiambenana 15 Martsa 1997, pejy 17-22, sy ny 15 Febroary 1992, pejy 25-28.
Ahoana no hifandraisantsika tsara amin’ny hafa? Diniho ny zavatra nety sy tsy nety nataon’ireo olona voaresaka ao amin’ny Baiboly.